ဗုဒ္ဓကမ္ဘာသာသနာဟိတ အသင်းအလှူငွေ ထိန်သိမ်းရေးတာဝန်ခံများ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ရေးသားသူ A BuddhismworldAdmin on ဖေဖော်ဝါရီ 13, 2012 at 12:37am in ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်(သာသနာဟိတအသင်း)
အောက်ပါတာဝန်ခံများမှ(ဗုဒ္ဓကမ္ဘာသာသနာဟိတအဖွဲ)့သို့မတည်လှူဒါန်းငွေနှင့်လစဉ်လှူဒါန်းငွေများကို (KBZ) ဘဏ်တွင်ဘဏ်အကောင့်ဖွင်ပြီးတာဝန်ယူထိန်သိမ်းထားပါသည်။
Account No.0451210053098 (Kanbawza bank ltd..Botahtaung)Name of Account - U HLAING KYAW HTWENRC/CRC No(s)- 12/AUKATA(N)148171
(၇)facebookလိပ်စာ =http://www.facebook.com/profile.php?id=100001326674903 ဘလော့အမျိုးအစားခွဲရန်(ဥပမာ.စာပေ.ဗုဒ္ဓ၀င်.....)
Permalink than htike soe သည် မတ် 11, 2012 11:55pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ ကိုလှိုင်ကျော်ထွေးဆီအလှုငွေကျပ်(၇)သိန်းလွဲထားပါသည်။တနလာင်္ အင်္ဂါနေ.လောက်တွင်ဘဏ်ထဲဝင်ပါလိမ်.မည်။သာသနာပရဟိတ၏မတည်ငွေဖြစ်ပါသည်။ အလှုရှင်များကတော.။။။။။။။
မအေးအေးအောင် မိသားစု (ခေတ္တဂျပန်) ယန်း ၁သောင်း
အောင်ကိုမျိုး (ခေတ္တဂျပန်) ယန်း ၃သောင်း
သန်းထိုက်စိုး ယန်း ၃သောင်း
Permalink လှိုင်ကျော်ထွေး သည် မတ် 13, 2012 5:09pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ ကိုသန်းထိုက်စိုးရေ.....လွှဲပို့လှူဒါန်းငွေ (၇)သိန်းကို လက်ခံရရှိပါတယ်။ လှူဒါန်းမှု အစုစုအတွက် သာဓု-သာဓု-သာဓု ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Permalink A BuddhismworldAdmin သည် မတ် 13, 2012 5:41pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ သာဓု...သာဓု....သာဓု....
Permalink than htike soe သည်ှဧပြီ 19, 2012 12:31amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ ကိုလှိုင်ကျော်ထွေးခင်ဗျာ(သာသနာပရဟိတ)အတွက် ယခုလအလှုငွေကျပ်(၃)သိန်းကိုလွှဲပို.ထားပါတယ်။
(၁)မရတနာခင် akasakaမှ ယန်း ၅၀၀၀
(၂)ကိုမင်းစိုး akasaka မှ ယန်း၅၀၀၀
(၃)ကိုဟန်ဇော် မနီလာ မိသားစု မှ ယန်း ၃၀၀၀
(၄)အောင်ကိုမျိုး မှ ယန်း ၁၀၀၀၀
(၅)သန်းထိုက်စိုး မှ ယန်း ၇၀၀၀ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပေးဝေပါ၏။အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြပါကုန်လော.
Permalink than htike soe သည်ှဧပြီ 21, 2012 12:17amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ ကိုလှိုင်ကျော်ထွေးခင်ဗျာ။။ကျွှန်တော်ယခုလအတွက်အလှုငွေကျပ်(၃)သိန်းလွှဲထားပါတယ်။ လက်ခံရရှိပါသလားခင်ဗျာ။အကြောင်းပြန်ပေးပါခင်ဗျာ။
Permalink than htike soe သည် မေ 16, 2012 12:01amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ ကိုလှိုင်ကျော်ထွေးဆီကိုဒီလအတွက်အလှုငွေကျပ်(၂)သိန်းလွှဲထားပါတယ်။အလှုရှင်များကတော. အောင်ကိုမျိုး မှ ကျပ် (၁)သိန်း
ကိုဌေးဝင်း မိသားစု akasaka မှကျပ်(၅)သောင်း
မရတနာခင် akasaka ကျပ်(၅)သောင်းတို.ဖြစ်ပါတယ်။
Permalink လှိုင်ကျော်ထွေး သည် မေ 16, 2012 3:26pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ အလှူငွေကို ဒီနေ့ လက္ခံရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
Permalink than htike soe သည် ဇူလှိုင် 18, 2012 12:04amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ ကိုလှိုင်ကျော်ထွေးရေ...(၈)လပိုင်း(၁၉)ရက်နေ.မှာလှုမယ်.အလှုအတွက်ကျွှန်တော်ဒီမှာ ကြိုးစားပြီးအလှုခံနေပါတယ်။။(၅)သိန်းတော.ရမယ်မှန်းထားပါတယ်။(၈)လပိုင်း(၉)ရက်နေ.မှာ
Permalink than htike soe သည် သြဂုတ် 9, 2012 12:45amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ အကိုရေ၂၀၁၂၊၈၊၁၉ရက်နေ.အလှုအတွက်အလှုရှင်စ၇င်းပါ။ ၁။ဦးရင်အောင်+ဒေါ်မြင်.ကြည်ယန်း(၁)သောင်း
Permalink ရှင်ပညာဇောတ သည် နိုဝင်ဘာ 29, 2013 12:05amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။ သာဓု..သာဓု..သာဓု..ပါဗျာ... အားလုံးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ....။